Bayaan Ka soo baxay Ururka Siyaasiga ee Banaadiriga (SANU)
Alif kaa qaloocday Albaqra ma toosiso
War saxaafadeed u so saaray ururka SANU ee Banadiriga oo ka jabaab celinaayey qolo iska magacowday maamul aan loo dhameeyn .BARTAMAHA BARIGA SOOMALIYA oo loola amakaagay iyo yaabay.
Waxaan jecel nahay in aan idiin soo gudbino arigtida iyo hadafka aan ka qabno arrimaha ismaamul goboleedka waxaan u rajeynaeynaa guul, haddii laysu afgarta ?.in loo dhiso maamul ummadda u dhalatay iyo kuwa ku nool Gobolka Banaadirland, iyagoo muddo dheer sugayay kuna hanweynaa in ay u curatoDawlad maamul Goboleed oo ay u dhan yihiin dhamaan beelaha dadweynaha Gobolka Banaadirland. Haseyeeshee, himilidaasi iyo rajadaasi ilaa iyo hadda ma suuragalin. sababto ah waxaan maqalnay cid dano gaar ah ka leh in ay wadaan maamulkaas la damacay in la hirgaliyo, kuna dhawaaqay maamul la magac baxay BARTAMAHA BARIGA SOOMALIYA magac bixintaas oo aan la garaneyn meeshu ka soo jeedo? [GUJI...] Yaase loogu daneyna-yaa magacyadan mara saarka ah?
Ismaamul goboleedka madaxa banaan maxa fashilikaro?.
Sida la wada ogyahay Fashilaadda jiritaanka Ismaamul goboleed waxay u hor-seedeen dhul goosi, oo looga gol leeyahay ku gor gortanka awood qaybsiga iyo sid-bursi, loga heli lahaa Shirka KENYA (Eldoret) iyada oo aan loo aaba yeelin marna mas-laxada dadka deegaanka ku nool iyo suurtagelinta nabad ku wada noo-laanshaha ummadda iyo wax wada qabsigooda. Dalka waxaa loo kala jar jartay cad cad oo waxaa loola baxay magacyo aan xuseeynin magaca Soomaaliyeed, ee waxaa loogu magac daray erayga (medal est .). BARTAMAHA BARIGA dhulkaas oo lo wada yaqaan Banadir waxaa la doonaaya in la marin habaabiyo Taariikhda dhuleed..
hadaba si loo raali geliyo quwadaha shisheeye oo taageerada lagaga doonanaayay, kalsoonina looga samee-sanaayay. Waxaa dhulka loo samaystay maamulo, qaab dhis-meedkooda lagu salayay habka casriyadii dhul goosiga ee mar hore laga soo guuray, waxaana degaannada kala xadeeya qabiilada, had-ba sida uu is-gaashan buursiga saamaxayo. Arintaasine waxay sii kordhisay xasilloni dar-radii jirtay iyo is-aamin la’aantii, waxayna sii ololisay xiisadihii iyo cadaawaddii la doonayay in maamuladaasi lagaga gudbo. Maantana waxaa, weli, sii socda xarig jiidkii oo waxaa lagu mash-quulsan yahay dhul kala qabsi iyo geyi sheegasho. Taasine waxay dhallisay in maamulada aysan no-qonin wax deggan oo lagu kalsoonaan karo, lehna sharciyad (legi-timacy) ay cid ku mattalaan.
Dajaal ma jiraa mise ma jiro: Jawaabtii cabdulwaaxid Khaliif ee Shiikh Maxamed Shiikh Xuseen GUJI...
Haddaba annagoo ka tusaala qaadanaayna dhibkii loo geystay Xamar oo ay ka mid yihiin Burbur dhismooyin taariikhiga, xaalufin deegaan, boobka hanti dadweynaha,barakicin ee dulsaaranaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Banaadirland, waxaa marak madoonto ah in muda ahba sugeyni goorta ay hirgali doonto rajedeeni, riyadeyna in hadda iyo wixii ka dambeeya in ummadda Somaaliyeed ay yeeshaan xukuumad Federal ah oo awood buuxdo leh, si aan cidna loo dulmin xaqeeda ayna ugu daran tahay caddaaladarrado,duudsiga xuxuuqeed iyo awood sheegashada aan geed looga soo gambanin ee looga hortaagan yahay Banaadiriga iney ayagu kaalin horyaalnimo ku yeeshaan dhismaha maamul goboleedka Banaadiriland ayakoo cid kastaba ka mudan, ugana xaq leh. cadaalad laysu maamulo. In la iska qabto dulmii-lowayaasha iyo qas abuurayaasha; bulshada weynta xaqa u leh ismaamul Goboleed Banaadirland ay hadda si aad ah u muujinaayaan in ismaamul Goboleedka Banaadirland ay lagama maarmaan tahay in uu yeesho maamul u gaar ah oo ka tarjumi kara danaha gaarka iyo dabeecadaha u goonnida ah ay bulshada maamulkooda hoose imaandoona .
Runtii waa talaabo tixgelin mudan oo ka timid walaalaheeni Xamar daye, waana wax lagu faani karo aragtida ay ka qabaan in lagu dhaqaaqo sii wada jir ahna wax looga qabto, taas oo aan ula jeedo is afgarad iyo wada tashi madaamo aan nahay cidii mudneeyd in arrimahaani lagala tashado.
ururka SANU ee Banadiriga intaas oo dhan isha ku haayna xog-ogaalna u ah howshii aheyd ismaamul goboleedka Banaadirland kuna mashquulsaneyn mudo dheer sanooynkii la soo dhaafay mar-xaladahii u soo maray guud ahaan . dadyowgeyni, kana dheregsan waayo aragnimadii laga dhaxlay dagaaladii sokeye iyo cawaaqib xumadii uu na dhaxalsiiyey, ayaan codsi buuxa u soo jeedinaynaa dhammaan wax garadka Xamar iyo xamardaye in ay masuuliyad iska saaraan taaba galinta talaabadan ismaamul goboleedka, loogana dhabeeyo sii wada jir ah.sidaasi awadeed waxaan diyaar ula nahay in aan taaba galino hadii laysu afgarto? labada dhinacaba.lana sameeyo Shirci kala haga labadda dhinacba( law an order) ayado midkasta dhowraayo nidaamka lagu hashiindoono.
Waxaa la soo gaaray xilli aan indhaha laga daboolan karin dhibaatooyinka maalin la noolka ah ee dadkeena ku haysta degaannadooda, oo ay ahayd in ay sharaf,cisad, nabadgalyo iyo qiimo ugu nooladaan dhulkooda.
Waxaa maanta la joogaa xilligii loo hawgali lahaa dhismaha Maamul Goboleedka Banaadirland u gaarto himiladeeda iyo guul wax ku ool ah ayna khayrkooda wax kula qaybsadaan,Soomaalidu waxay ku maahmaahootaa "':Nin seexdo siciisaa dibi dhalaa "' Taas oo micnahiisu yahay cid aan ka sugnaa ma jiraan badbaadinta dadyawgeynii si loo sugo xaqa iyo dareenka ummadda u qabto in ay hooygooda ugu noolaadaan si la siman bulshooyinka uu qaranku kala dhaxeeyo daris wanaag walaaltinimo iyo isu hiilin .
Haddaba, Ururka SANU ee Banaadiriga wuxuu talo ku soo jeedinaayaa in:
marka hore lagu hashiiyo habka lo dhisaayo maamul Goboleeydka Banadirlaand.
lagu shaqeeyo Siyaasad qeexan oo ku dhisan hab walaaltinimo iyo deris wanaag dhamaan Beelaha Soomaaliyeed
mowqif mideysan laga istaago cidii ku soo xadgudubta ku dhaqanka ismaamulka Banaadirland
Waxaa lagama maarmaan ah in xulo xubno firfircoon ee ka socda dhinacyada ay arrimahaani quseeyaan oo noqda dad garasho siyaasadeed iyo aqoonba leh, loona xilsaaro u hawlgalka dib u dhisida maamul Goboleedka Banadirland iyo ka qaybgalka dhismaha dawlad federaali ah ee mustaqbalka .
Waxaa shaki ku jirin in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Banaadirland u xaq u leeyahay sida bulshooyinka kale ee ku dhaqan gobollada kale dalka in ay aayahooda iyagu maamulaan. Taas oo aan waxba u dhimmeyn xiriirka walaaltinimo ee wada noolaanshaha bulshada oo ay dadka reer Benaadir wada noolaanshahaas bulsheed uu noloshooda qayb weyn ka yahay. Waxay horseedi doontaa in nabad iyo horumar loogu soo dabaalo aayaha gobolka iyo dadka ku dhaqan.
"Ma qabo inuu yahay Shirka Nayroobi mid najxaya waayo waxbaa ku hoos qarsoon" sidaas wuxuu kusheegay waraysi dheer oo GUJI... 2/9
Magaalo waliba waxaa maamula dadka u dhashay iyadoo dadka kalana si xor ah ugu nool yihiin.tusaale Switzerland, Netherland, Talyaaniga, Ingiriiska , France iyo kuwa kale oo badan madaxdeeda waxay ka soo jeedaan ismaamul goboleedyada dalkooda ee dadka degaanka, sidaas waxaa la mid noqon kara Shacbiga Banadirland ,oo ay tahay waajib kor yaal in ay sika dhax xulaan haddaba dadka u dhashay Banadirland ee masuulka ugu noqon lahaa maamulkoodana gacantana ugu qabsan lahaa si loo hagaajiyo caasimadda qaranka iyo degaannad ku xeeran.
Waxaan qabnaa in mas'uuliyiinta beelaha kala duwan ee xaqqa u leh Gobolka Banaadirland ay u howl galaan iskuna mashquuliyaan sida ay u xalin lahaayeen qilaafadka u dhexeeya, iyagoo tixgelinaya, mudnaanta koobaadna siinaya rabitaanka, himilada, wanaaga iyo nabadda Shacbiga u dhalatay ismaamul Goboleedka Banaadirland oo runtii rajo beel ku dhow.
Waxaan qabnaa in aqoonyahanada, waxgaradka,dhallinyarada iyo haweenka ka soo jeeda beelaha kala duwan ee xaqa u leh Gobolka Banaadirland ay muujiyaan firfircooni, waxtar u leh qadiyadda iyo mas'uuliyada iyagoo si daacadnimo ah ugu adeegaya abaabulka dhismo maamul Goboleedka Banaadirland, Waxaan qabnaa in maanta lagu jiro xilli adag oo loo baahan yahay samir, dulqaad, adkeysi, iyo waxqabad, si looga gudbo marxaladan.
Dacwo dhan ka ah Askarta DKMG oo soo gaartey ururka Somali Banadir Human Rights Organization GUJI... 23/9/02
Ugu dambeyn, waxaa soo jeedinaynaa in Beelaha kala duwan ee xaqa u leh dhismaha dowlad Gobolka Banaadirland in ay iska ka kaashadaan waa hadii lagu wada hashiiyo ? qorshahan Banadiriga aya horayba u soo jeediyay waliba ka diyaarisay nidaam hab dastuuri ah oo an cidna aan dulmeyn dhamaan kuwa u dhashay,kuwa kadhashay, kuwa kuwada noolba,in maamul goboleedka .sida ugu hoboon ee caddaalad ku jirtana wax ugu qabtaan maamulkoodi, anagoo rajeyneyno in la iska ilaaliyo sidbursigii Soomaaliya hore u kala geeyey, lagana faaideysto marxalada taariikheed ee la soo maray, waxayna nala tahay in Soomaaliya ay ku filan tahay natiijadii laga soo dhaxlay caddaalad darada iyo duudsi xuquuqeed laga soo bilaabo 1950 ilaa maanta " Älif kuu hagaagaa al Baqruu ku gaadhsiiyaa" murti soomaaliyeed aya oraneysa :"wixii laysku og yahay layskuma eedo"
Gudoomiye ku xigeenk ururka Siyaasiga Banadiriga ee SANU
Dr. Cabdulkadir Xaaji Suufi (Muriidi Golf )
Canbaareyn Afduub loo geystay Dhibanne Cabdixakiin Maxamed Xaaji (SHiikheey) waxaa magaaladda Xamar Xafadda X/Weyne Lagu Afduubay wiil Dhalinyaro ah oo ka mid ah Beelaha aan hubeysneyn. GUJI
» DKMG oo awoodeeda ku tijaabisa dadka danyarta ah [Macalin]
» Ragga toodii aragnaye , Dumar talo ma laga deyey [Hirsi]
» Baadida Nin Baa Kula Deydeyi Daala Kaa Badane [Gutale]
» QAAMUUSKA MAAHMAAHYADU WAA QIIMA-GAL [Imdeeq]
» SOOMAALIYA - QABQABLE DAGAAL IYO QABYAALAD[Canab]
» Mushkiladaha Soomaalida Qurbaha (3) [wq.SaciidCali]